Uhlaziyo olutsha lwe-CLAM: Uhlalutyo, ixabiso kunye neempawu | Iindaba zeGajethi
Sibuya nohlalutyo, kwaye kukuba ihlobo kude nokuma kweenyawo zethu lisikhumbuza ukuba kukho ezinye iimveliso ezifuna ulwazi xa zijonga ukuthengwa kwazo. Ngoku ngokuhamba kunye nokubaleka sifuna ukuzihlukanisa, imeko elungileyo kwaye ngaphezulu kwako konke ukuphumla. Zimbalwa izinto ze-elektroniki ezinceda oku ngaphezulu kweentloko zentloko ezinamakhanda, kude lee neeNtloko ezingenantambo zeNtambo ezihlala zizalisa iipokotho zethu kubusuku bemihla ngemihla. Namhlanje sijonga imveliso yeFresh'n Rebel, ii-headphones ze-CLAM ezinesandi esikumgangatho ophezulu kunye nokucinywa kwengxolo. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba zintengiso elungileyo.
Ngokufuthi kunzima ukuba sifumane ii-headphone ezilungileyo, intengiso igcwele ngabantu abaziwayo, ezinye zingaziwa kakuhle kwaye ezinye ubungazi nokuba zikhona. Uhlala uye kwivenkile yakho oyithembileyo okanye ukubheja kwiAmazon kunye nokufumana amanqaku kunye nohlalutyo, kodwa kusenzima ukujongana nayo. Isandi kunye nentuthuzelo yinto yobuqu kwaye kuhlala kunzima ukulungelelanisa ezi mpawu, pero Njengamaxesha onke, kwiActualidad Gadget sizama ukuzibeka ezicathulweni zabafundi bethu, ngakumbi abo bafuna kuthi ukuba bazi imveliso ngokunzulu ngaphambi kokuyithenga, ke masiye apho.
1 Izinto zedayi yePremiyamu kunye noyilo
2 Ukuzimela kunye nokunxibelelana
3 Umgangatho wesandi kunye nentuthuzelo
Uyilo lwedayi kunye nezinto premium
Amanqanaba asezantsi naphakathi ayaqhubeka nokukhuphisana ukunika iimveliso ezibonakala ngathi azikho, nangona kunjalo, Imizuzwana nje embalwa emva kokuvula ibhokisi ye-Fresh´n Rebel CLAM ukuqonda ukuba babeke inkathalo kunye nokuzimisela ekukhetheni uyilo, izinto kunye nemibala. Ukuqala, sifumana uluhlu olungekho ngaphantsi kwemibala emithandathu, ngamnye unegama lawo elikhethekileyo kunye nelezentengiso, kodwa ndiza kukushwankathela: Grey; Luhlaza lwamanzi; URose; Luhlaza; Ubomvu nebala elimnyama.
Material: Iplastiki - intsimbi
Ubunzima: I-240 gram
Imibala: I-Ice Grey, iMisty Mint, Pinki enothuli, iBlue Petroli, iRuby ebomvu kunye neGrown Storm
Ezi headphone zinoyilo "oluqhelekileyo", olwenziwe ngeplastikhi, nesiseko sealuminium ngaphakathi esikhanyayo xa sisolula iqhiya. Sinee-cushions ezinesetyhula, oko kukuthi, bayigquma ngokupheleleyo indlebe ngaphandle kokuyicinezela, kunye ne-textile-viscoelastic lining kwindawo ephezulu ethintela uxinzelelo kwi "cocorota". Ngokuqinisekileyo ziyilelwe ukuba zikhululeke, njengoko ii-headset nganye zihamba kwi-axis ukuziqhelanisa neemfuno zomzimba zomnini, Ngendlela efanayo yokuba ziyagoqeka ukuze zikwazi ukuhambisa nazo naphina. Sinepaneli yamaqhosha (ivolumu kunye nokudlala-ikhefu) kwi-earphone yasekunene, apho kukwakhona izibuko le-microUSB kunye nemakrofoni. Kwifowuni yendlebe yasekhohlo sine-LED efundisayo kunye nonxibelelwano lweJack ye3,5mm kwezona zakudala.
Inkampani iFresh´n Rebel iyasiqinisekisa ukuba siza kuba nakho ukonwabela ukuya kuthi ga Iiyure ezingama-35 zokuzimela, ewe, ingqumbo yokwenene. Kodwa njengoko kusoloko kusenzeka ngokubhekisele kwiibhetri kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezininzi ezinje ngobushushu, umgangatho woqhakamshelwano kunye nomthamo esimamela kuwo umculo. Nangona kunjalo, sifumene iziphumo ezifanayo nezo zethembiso lophawu kwincwadana yakho yokwazisa, kodwa kufuneka sikhumbule kungekuphela nje sinesibuko se-microUSB (ukuba ucinga ukuba ngo-2019 uza kuyeka ukuyibona, ndiyakusizela) kodwa ayifuni iiyure ezingaphantsi kwe-3 ngentlawulo epheleleyo, izinto ekufuneka ziqwalaselwe.
Malunga nonxibelelwano esinalo Bluetooth ukumamela umculo ngaphandle kwefowuni kwaye ngokuqinisekileyo zibuko I-3,5mm jack kwabo baqhubeka nokubheja kwiklasikhi. Ibhokisi ibandakanya i ibhegi yokuhambisa impahla kwaye yona iqulethe iintambo ezimbini: I-3,5mm Jack-Jack kunye ne-USB-microUSB, enombala ohambelana nale ikhethiweyo kwiifowuni zethu kwaye iboshwe ngenayiloni ukugcina ukuqina kwayo. Le ngxowa, ngaphandle kwayo yonke into, ayibandakanyi naluphi na uhlobo lwesiphatho, nangona ii-headphone ezisongiweyo zilunga ngokugqibeleleyo kwaye zikwenza ukuba zikhuseleke. Ukudibanisa kulula, Xa uzivula ngokucinezela iqhosha lokuDlala, sishiya licinezelwe ubuncinci imizuzwana emithandathu de kube ukukhanya kwe-LED ngokukhawuleza, emva koko kwifowuni okanye kwi-PC esifuna ukuyisebenzisa njengomthumeli kufuneka sikhethe kuyo. Iphaneli yokudibanisa yeBluetooth.
Umgangatho wesandi kunye nentuthuzelo
Ezi CLAMs zeFresh'n Rebel zinamabini 40mm abaqhubi ezihambisa isandi esinamandla nesicacileyo nakwimithamo ephezulu. Izinto ziba ngcono ukuba sithathela ingqalelo into yokuba ukuba sisetyhula ngokungathandabuzekiyo basebenzise ithuba elingaphezulu kokurhoxiswa kwengxolo yangaphandle ngenxa yolungelelwaniso oluchanekileyo. Andikhange nditsaleleke kwinkqubo ye-NAC, yiyo loo nto ndikhetha ukurhoxiswa kwengxolo. Isiphumo kukuba sinesiphumo ibass enzulu ixhaphake kakhulu kolu hlobo lwee-headphone, ngaphandle kokuphulukana namanye amanqaku kunye nezixhobo zomculo ngokubaluleka, kwaye oku kuyathandwa ngakumbi xa ushiya umculo wasezidolophini oqhelekileyo kunye nokubheja kwiRock & Roll okanye kwiFlamenco Fusion.
Ngokuthuthuzela, ngokucacileyo ii-headsets ezinesetyhula zinenkalo engalunganga esaziyo sonke: zinika ubushushu obuninzi. Ngamaxesha ehlobo ngekhe kubenzima kuwe ukugqiba ukubila indlebe ukuba uhamba kakhulu nabo esitratweni, kodwa lixabiso lokuhlawulela isandi esihle nesizinzileyo ngaphandle kweziphazamiso. Ukunxiba iiyure ezininzi akubanga, ubuncinci kumava am, indlebe okanye iintlungu ezingasentla kwentloko, endingenakukwazi ukuyithetha ngazo zonke ii-headphone.
Uhlaziyo olutsha lwe-CLAM
Unxibelelwano olulula kunye nokuzimela okuhle
Umgangatho ophezulu wesandi ulungelelene kakhulu
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, phakathi kwezinye iindawo ezininzi, unokuzifumana ezi Uhlaziyo olutsha lwe-CLAM ukusuka kwi-euro ezingama-79,99 kwiAmazon (unxibelelwano), kwaye ngokunyanisekileyo andifumananga nantoni na eyahlulahlula ngokuthe gca kwezinye ii-headphone ezinamaxabiso afanayo, kodwa akukho ziphene zibalulekileyo zenza ukuba ixabiso labo licace gca. Koko kukuthi, Ukuba uyayithanda uyilo, kwaye ujonge ukuzimela kwisandla sokukhupha isandi kunye nomgangatho wokurhoxiswa kwengxolo, kutheni ungayi kwiFresh´n Rebel CLAM?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Fresh´n Rebel CLAM, ithembisa ukuguquguquka, intuthuzelo kunye nomgangatho [Uhlalutyo]